Dhammaan Dukaamada Apple ee ku yaal Boqortooyada Midowday ayaa hadda furan | Waxaan ka socdaa mac
Sawirka hogaaminaya qodobkaan ayaa umuuqda mid taariikhda galay, uguyaraan hada. Cudurka faafa ee ka dhasha Coronavirus wuxuu sababayaa in dhaqaalaha wadamada uu hoos u dhaco. Shirkado badan ayaa ku khasbanaaday inay xiraan oo dukaamo badan ayaa haysta intii karaankooda ah. In kasta oo Apple aysan haysanin dhibaatooyin dhaqaale oo aad u tiro badan, haddana waa run in Apple Stores ay muddo dheer ka xirnaayeen adduunka oo dhan. Wadamada qaar sidan ayey ku sii socdaan laakiin UK gudaheeda hadda dhammaantood way furan yihiin.
Apple ma aha mid ka mid ah shirkadaha dhibaato badan ayaa kasoo gaadhay dhibaatada dhaqaale waxaa soo saaray OCVID-19. Sababtoo ah qaybta tikniyoolajiyadda ayaa ka mid ahayd kuwa ugu faa iidada badan in kastoo hada wixii ka soo baxa waa la bixiyaa. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah Apple Stores ee shirkaddu ku leedahay adduunka oo dhan waa la xiray bilo badan si loo yareeyo infekshinka ku dhaca dadweynaha.
Boqortooyada Ingiriiska hadda, xaaladdu waxay umuuqataa inay kujirto dooxada xasilloon iyo in tirooyinku ay billaabayaan inay lasocdaan. Heerka tallaalka awgiis, dadka soo saaray unugyada difaaca jirka iyo tallaabooyinka kale ee nadaafadda, Apple waxay go’aansatay inay tahay waqtigii dib loo furi lahaa Apple Store-ka dalka. Sidaas dhamaan 38 dukaan way furanyihiin dadweynaha inkasta oo ay macquul tahay in tallaabooyinka sida adeegsiga maaskaro, masaafada dadka dhexdooda ah iyo kuwa kaleba ay tahay inay sii wadaan in loo hoggaansamo.
Dukaamada guud ahaan waxay ku shaqeeyaan saacado yar, qaarna waxay xirmaan 18:00. Kuwa kale, sida dukaanka Brent Cross ee London, wuxuu furan yahay ilaa 20:00 pm, halka Apple White City ee London ay furantahay ilaa 21:00 pm.
Hadda waan furannahay si aad wax uga iibsato adoo ballansanaya kulan hal-hal ah oo lala yeelanayo takhasusle, amarka ka qaadashada khadka tooska ah, iyo Taageerada Genius markaad ballan sameyneyso
Waxaan sugeynaa u guuritaanka wadamadan waxaanan bilaabaynaa inaan aragno nalka dhamaadka tuneelka. Aynu wax yar ka badan qabanno wax yar ayaa hadhay (Waxaan rajeynayaa sidaas).
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaammada Apple Apple oo dhan ayaa hadda furan